Gudoomiyaha Barlamaanka Puntland oo Baaq u Jeediyay Beesha Caalamka – Radio Daljir
Gudoomiyaha Barlamaanka Puntland oo Baaq u Jeediyay Beesha Caalamka
Diseembar 17, 2015 4:11 b 0
Somalia, December 17, 2015-(Daljir)_Guddoomiyaha Baarlamaanka Dawlada Puntland Axmed Cali Xaashi oo markii ugu horaysay ka hadlay Hiigsiga 2016-ka,ayaa sheegay in Dawlada Puntland iyo dadkeeda ay ka go’an ku gareen in sanadka 2016-ka ay dalka ka dhcaan doorashooyin lagu saleeyay deegaan.
‘’Waxna waa Sharci waxna waa waxaan sharci ku dhisnayn,wixii lagu heshiiyay Dastuurka ayay ku qoran tahay,annagu ka Baarlamaan ahaan iyo Xukuumadu wax badan ayaan ka doodnay,shacabkuna Lix goobood ayaan Aragtidooda lagu waydiiyay waxay qaateen aragtidii Dastuurka ku qornayd taasaana sharci ah’’Ayuu yiri Guddoomiyaha Golaha Wakiiladda Puntland.
Axmed Cali Xaashi ayaa sheegay in loo baahan yahay in la fuliyo hesiisyadii horay loo galay,wuxuu sheegay inay tixgalinayaan rabitaanka dadweynaha reer Puntland.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Dawlada Puntland Axmed Cali Xaashi ayaa sheegay in maamulada ku doodaya in dib loogu noqdo Nidamka 4.5 in macnaheedu uu yahay in Soomaaliya ay joogto halkii ay joogtay 1991-dii,sidaa darteedna loo baahan yahay Madaxda maamulada sidaa u fakaraya inay horay u socdaan,ayna dhowraan heshiisyadii la galay.
Garoonka Diyaaradaha Bosaaso oo Taliye Cusub Yeeshay